अबको ५ वर्ष ४ राशिले ढिलो नगरी यी व्यवसाय सुरु गर्नुहोस, सफलताले शिखर चुम्नेछ – Khabar PatrikaNp
October 27, 2020 1569
तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? यदि छ भने तपाईंले राशिसँग जोडिएका केही कुराहरुतर्फ ध्यान दिनुभयो भने यसले ठूलो सहयोग हुनसक्छ । ज्योतिष विज्ञानका अनुसार करिअर, पढाई तथा व्यापार व्यवसायको सफलताका लागि राशिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यदि राशिलाई ध्यानमा राखेर पढाई, करिअर तथा व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने सफल हुने संभावना बढी हुन्छ । कुन राशिलाई कस्तो पढाई, करिअर र व्यवसाय गर्नु उत्तम मानिन्छ, आउनुहोस् हेरौं ।
Nextकस्ता हुन्छन मंगलबार जन्मिएका मानिसहरू,हेर्नुहोस
युरोप रोजगारीका लागि पोल्याण्डको बाटो, साढे नौं लाख रुपैंयाँसम्म तिर्छन नेपाली
सोमबारको दिन यसरि बस्नुहोस् भगवान् शिवको ब्रत, हुनेछ लाभैलाभ ! (पूजा विधिसहित)
देशभर आइसीयू र भेन्टिलेटरमा १३५ कोरोना संक्रमित